Habboon ma Jinbaa? Q3AAD W/Q: Cabdiraxmaan Maxamed Axmed(Warmooge) | Laashin iyo Hal-abuur
Habboon ma Jinbaa? Q3AAD W/Q: Cabdiraxmaan Maxamed Axmed(Warmooge)
Habboon ma Jinbaa? Q2AAD
Wakhti dheer ayaan guriga Habboon ku sugnayn, dareen deggan ayaan la galay, mid aan degganayna waan kala soo baxay. Gurigaygaan tagay anniga oo lay moodo wax la dardaray, qolkaygaan seexday habeenkii xilli danbe iyadoo niyaddayda Habboon ka buuxdo. Riyadaan ku arkaa, kolkaasaan la fadhiistaa, oo la sheekaystaa, huradaad dhammaystaa, sagaal saacadood ka dib, haddana waan ku soo toosaa sidii anigoo niyadda ugu haya. Si kastoo aan wax u wadaba iyaan lay horkeenaa, heer waxaan gaadhay aan gabadh ba la hadli kari waayo. Saddex cisho ka dib ayaan dib ula kulmay Habboon, dhib inuu I haysto ayaan fahansiiyay. Qof inaan ka hadhsan waayay ayaan u sheegay, sababtana aannan garanayn, “Waayo qofku?”, ayay I tidhi, anna “Waa gabadh!”, ayaan ku yidhi, “Waad jeceshahay gabadhaa!” ayay iska tidhi si yaroo fudud, illeyn afaanad lahayn ma maamushid, oo jacayl ba miyaan aqaannay, “Oo ma sidanuu dadka ugu dhacaa walaal?”, ayaan waydiiyay iyadii, “Haa” kute.